Palestina: Mieritreritra fandevenana tsy tena izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2018 0:54 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, Ελληνικά, polski, bahasa Indonesia, македонски, English
Tena sarotra ho an'ny Palestiniana ao Morondrano Andrefana sy Gaza ny hitsidika an'i Israely, ary noho ny antony ara-politika dia tsy ho vitan'ny ankamaroan'ny Arabo hafa ny manao izany, satria tsy ankatoavin'ny ankamaroan'ny firenena Arabo ho toy ny fanjakana i Isiraely. Mandritra izany fotoana izany, tsy afaka mivezivezy any amin'ny ankamaroan'ny tontolo arabo ireo olom-pirenena Palestiniana ao Israely (eo amin'ny 20% eo amin'ny mponina), satria manana pasipaoro Israeliana izy ireo.
Rasha Hilwi, izay teratany Palestiniana ao Isiraely, nandinika ny fiantraikan'ny famerana ny fivezivezena – rehefa maty izy.
Ao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginy, Zaghroda (izay midika hoe “ululations”), manoratra i Rasha hoe:
Masoandro mody Akka. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr yanivba (CC BY-SA 2.0). Akka sunset. Image by Flickr user yanivba (CC BY-SA 2.0).
Tampoka teo dia tsapanao fa mihalohalo mandrakotra ny lanitra ny fahafatesana, na dia tsy tena nandao azy mihitsy aza izany. Tsy ny fahafatesana ihany, fa ny “ity aretina ity” koa, araka ny fantatra. (Na dia ny namako aza dia miantso ny marika kintana ho “izany marika izany”.) Izany hoe, homamiadana.
Ary rehefa tonga ny fahafatesana, noho ireo antony maro samihafa, manontany tena aho hoe: “Fa maninona aho no gaga?” Noho izany dia manome lanja ny fiainana indray aho – mandritra ny andro vitsivitsy.
Na izany na tsy izany, tsy zava-dehibe izany …
Fotoana vitsy lasa izay dia nanapa-kevitra ny hanoratra ny didim-pananako aho.
Etsy ankilany, tsy te ho ratsy saina amin'ny fanaovana izany. Zavatra voajanahary ny fahafatesana. Izany farafaharatsiny no inoako. Ary satria ara-boajanahary, dia manoratra momba izany aho. Araka ny nolazain'ny renibeko, na koa ny renibenao hoe “Tsy misy mahalala izay ho avoakan'ny ampitso!”
Volana vitsy lasa izay dia niverina avy any Kairo aho. Roa andro taorian'ny niverenako, dia namoy namana akaiky iray aho; nandao ho amin'ny toerana lavitra izy, tsy fantatr'ireo rehetra izay mamaky ireto andalana ireto … Manantena aho!
Tsy hanao tantara lavabe momba izany ho anareo rehetra aho. Na izany aza, manana fanontaniana sasantsasany momba ny fahafatesana sy ny fombafombany aho. Rehefa hiala ho amin'izany toerana tsy fantatra, toerana lavitra izany aho, dia hatao any Akka ny fandevenana ahy- tsy manana tanindrazana hafa aho – hoy ny raiko. Halevina ao tokoa aho. Sa tsy izany?
Saingy mampijaly ahy ny hevitra fa ho faty aho ary mbola hipetraka ao am-poko ny fibodoan'ny [Israeliana]! Ahoana no hanaovan'ireo namako avy any Ramallah, Kairo, Damaskosy, Beirota, Amman, Tonizia, Maraoka, Sana'a, Baghdad ary Tripoli ny veloman'izy ireo mandrakizay?
Rasha manontany hoe:
Heverinao ve fa azoko atao ny mametraka ny didiko farany dia ny ahatongavan'ireo namako any Ramallah hanao veloma farany amin'ny vatam-patiko? Hevitra mampihoronkoditra: fahazoan-dalana omen'ireo manam-pahefan'ny fibodoana mba ahafahan'ireo namako hahita ahy rehefa maty aho! Saingy angamba koa fahafahan'izy ireo mitsidika an'i Akka, takalon'ny fanaovam-beloma farany ahy …
Ary ahoana ny amin'ireo namana malalako any Kairo, Beirut ary Amman?
Mety ve izany – ohatra – amin'ny didiko farany hanambara fa tokony hodorana ny vatako ary tokony handefasana ny lavenoko kely any amin'ireo namako any amin'ireny toerana ireny? Ary tokony hisy ny fivoriana ara-mozika sy ara-literatiora fa tsy fandevenana mahazatra? Azo atao ve ny mandefa ny fandevenana ahy amin'ny alalan'ny vidéoconférence? Na amin'ny Skype mihitsy aza? Inona no tsy mety amin'ny Skype? Farafaharatsiny mba maimaim-poana izany. Amin'izany dia hisy ny fandefasana mivantana ny fandevenana ahy avy any Akka mankany Beirota, Kairo, Amman, Tunis, Ramallah ary Gaza!
Fa nahoana no manatsaro-javatra? Angamba azoko atao ny manambara ao amin'ny didiko farany fa tokony hoentina eo amin'izy ireo ny vatam-patiko. Heveriko fa ho mora kokoa [noho ny tamin'ny fahavelomana] ny fahazoan-dàlana ho an'ny olona maty iray hiampita ny sisintany. Ny tena zava-dehibe dia tsy mitaky visa izany. Amin'izay dia ho afaka hahita an'i Beirut aho. Iza no mahalala? Angamba mety ho hitako izany.